Window Installer Error — MYSTERY ZILLION
(ကျွန်တော် Adobe Reader 9, WinZip 12 နဲ့ Java Environment 1.6 တင်တော့ အောက်ကerrorကျလာတယ်။
The installation package could not be opened. Verify that the package exits and that you can access it or contact the application vendor to verify that this isavalid Window Installer Package.
အဲဒီerror က windows XP ကော windows vista မှာပါဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီerror ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြေရှင်းရင်ရမလဲဆိုတာMZ မှပညာရှင်များမှဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။:((
valid ဆိုတော့....အစ်ကို window က လိုက်စင်နဲ ့လား...update တွေကလည်းတခါတလေ real window မှတင်လို ့ရပါတယ်...နောက်ဆိုရင်တော့ error တတ်ပါတယ်....ဥပမာ..window media player 11
ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်း window vista black edition တင်ထားတယ် ခုနကအကိုပြောသလိုဘဲ အဲ software တွေကို install လုပ်လို့မ၇ဘူး
ryan3145 wrote: »
Installation ဖိုင်တွေ မပြည့်စုံတာနေမှာပါ
မဟုတ်ဘူးဗျ ကျွန်တော်စက်မှာဆို၇င် warcraft ဒို့ frozen throne ဒို့လည်းသွင်းလို့မ၇ဘူး ပြီးတော့ mohterboard p5kpl-am se ၇ဲ့ network card Realtek RTL8101 Family PCIE fast ethernet မှာလည်း internet သုံးလို့မ၇ဘူး
OS က window vista black edition သုံးတာ ကူညီပေးကြပါအုံးဗျာ
black vista မသုံးပဲ....black XP သုံးပါလား....game အတွက်ပိုကောင်းတာပေါ့...vista ကသိပ်မသုံးဘူးဘူး...သိတဲ့သူတွေလဲပြောပါအုန်း
license window မဟုတ်ဘူးအကို။ အဲဒီ error က windows xp sp2,sp3 ကော windows vista ကော ဖြစ်နေတာအကိုတို့ရယ်။ ကျွန်တော်လည်း service center ကိုပို့လိုက်တော့ သူတို့က window အသစ်တင်ပေးလိုက်တော့ပြန်ကောင်းသွားတယ်။ ကျွန်တော်လည်းမကျေနပ်တာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်တင်ကြည့်တော့ပြန်မရဘူး။service centerက technician တွေကိုမေးကြည့်တော့window က activate မဖြစ်လို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တင်တာလည်းactivate ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဘာလို့ဖြစ်လို့လဲတော့မပြောတတ်တော့ဘူး။MZ မှမိတ်ဆွေများကလည်း၀ုိင်း၀န်းဆွေးနွေးပေးကြပါအုံး။
windows installer package version အသစ်ကို downloadလုပ်ပီးတော့အရင်installလုပ်လိုက်ပါ windows installer version မတူတာပျက်နေတာဆိုရင်ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်
ကိုယ့် installer ကကောကောင်းရဲ ့လားစစ်ဦး installer တွေမကောင်းရင်လဲဖြစ်တတ်တယ်
installer က ကောင်းတယ်။အဲဒီinstaller နဲတခြားသူcomputer မှာတင်တာရတယ်။ကျွန်တော်computerမှာသာမရတာ။
yeah i also can't install installer in my computer . It always show program doesn't apply with ur computer